Ihowuliseyili 26 intshi aluminiyam isakhelo ibhayisekile yombane 60V 2000W brushless motor yoMvelisi kunye noMthengisi | IIMI
26 intshi yealuminium isakhelo sebhayisekile yombane 60V 2000W imoto engenamsebenzi
Injini ye-hub yangemuva ka-2000w ekwaziyo ukuhambisa ibhayisekile yombane ngesantya ukuya kuthi ga kwi-55 km / h kumandla ombane acocekileyo. km / h kumbane ombane acocekileyo.
Umbala Mnyama / Mhlophe / OEM
Isantya esiphezulu 55-60km / h
Uluhlu 1: 1 imo yePAS, 60-80km
Imoto I-60v 2000w imoto engabhrashi
Ibhetri 60V 18AH Lithium-ion ibhetri
I-2000W enkulu yemoto
60V lithium ibhetri
Ubungakanani obukhulu be-60V 18AH / 22.4AH / 24.5AH ibhetri ye-lithium njengombane wokubonelela, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ukwazi ukukhwela ngokulula i-e-bhayisekile usuku lonke ngaphandle komcimbi. (Uluhlu lweekhilomitha ezingama-40 kumbane kuphela) iiyure ezingama-5-7 zexesha lokutshaja kunye noyilo olungena manzi yenza ukuba ibhayisekile yakho ihlale ilula.
I-disc eyi-disc eyi-180
I-brake ye-disc eyi-180 ibonelela ngokuqina ngamandla kwe-braking ngaphambili nakwivili elingasemva. Nokuba ukwehla okanye ukukhwela yonke imihla, inokuyaphula ngokufanelekileyo ibhayisekile xa ucinezela i-levers yebhayisekile.
Ukukhanya kwangaphambili kwe-LED
Kukhuseleko lomkhweli ngamnye ebusuku, isibane sangaphambili esikhanyayo siyimfuneko. Le bhayisekile ine-3W ukukhanya ngaphambili nangaphezulu kwe-80km yokukhanyisa uluhlu. Kwakhona ngezibuko lokutshaja le-USB.
Egqithileyo Amaxabiso aphezulu asezantsi e-China oMbane we-MTB ngebhayisikile ukuNqunyanyiswa okupheleleyo kwaBantu abaDala
Okulandelayo: Ixhotywe ngokupheleleyo ibhayisekile yombane yemithwalo